Kitra – Mpanazatra 23 nahavita fiofanana | NewsMada
Kitra – Mpanazatra 23 nahavita fiofanana
Nifarana omaly, teny amin’ny ivo toeram-piofanana baolina kitra Carion, ny fiofanana ho an’ireo mpanazatra ny mpiandry tsatoby, andiany fahatelo. 23 mianadahy izy ireo, nanaraka izany ka ilay teratany Slovaky, Alexander Vincele, manampahaizana avy amin’ny federasiona iraisam-pirenena (Fifa), nanome sy nizara ny fahaiza-manaony tamin’izany. Ny 20 ka hatramin’ny 24 jona lasa teo, nanatanterahina izany.
Nizara ho roa ny fiofanana, dia ny petrakevitra na “théorie” sy ny fampiarana na “pratique“, izay nifantoka tamin’ny fototra. Anisan’izany, ny fomba fanafanan-tenan’ny mpiandry tsatoby, ny fomba fakana baolina eny am-panidinana, ny fiatrehana ny lohalaharana amin’ny fanafihana, ary koa ny fametrahana ny rafitra hitondrana ny fanazarantena isan-kerinandro, isam-bolana ary ao anatin’ny taona iray. Marihina fa anisan’ireo niatrika izany fiofanana izany, Robin, mpiandry tsatobin’ny Barea de Madagascar, tompondakan’i Afrika ary Rajaozara Bruno.
Nolazain’i Alexander Vincele fa manana andraikitra goavana ny mpiandry tsatoby, ao anatin’ny ekipa satria miankina aminy avokoa ny zava-drehetra eny ambony kianja. Ny mpiandry tsatoby tsara indrindra dia ny mahay miara-miasa amin’ny ekipa misy azy sy ny teknisianina.
Nilaza ny tale teknika nasionaly, fa takiana amin’ireto mpiofana ny fandaharan’asa, rehefa tafaverina any amin’ny ligy misy azy tsirairay.
Hisy fifantenana ireo izay tena mendrika, tamin’ireo andiany telo niofana ka hanaraka fiofanana “haut niveau” indray, ny taona 2017.